myghanalinks - Zimbabwe
President Akufo-Addo has sent messages of condolence to the peoples of Malawi, Zimbabwe, and Mozambique following the devastation caused by the tropical cyclone, Idai.
Zimbabwe has faced a severe drought this year that has damaged crops and a United Nations humanitarian agency says 5.3 million people will require food aid this year.
At least 24 people have died in south eastern Zimbabwe as homes and bridges were swept away by a tropical storm, the country’s information ministry said on Saturday.
David Coltart, an MDC senator from Bulawayo and lawyer, called the ban “clearly unconstitutional and unjust”, ...
The simmering political crisis in Zimbabwe reached a boiling point early Wednesday as the military took control in Harare, confining 93-year-old leader Robert Mugabe to house arrest. But where that quick escalation will take Zimbabwe remains unclear.
Zimbabwe politics: Mugabe warns suspected plotters at party congress